Lesona ny fiainana dimy Nianatra avy Tamin'ny Cats sy ny Fifandraisana
amin'ny Lesley Sheridan
Rehefa nihaona voalohany sipako, Christopher, dimy taona lasa izay, I nanana afa-tsy iray lomisy ny fisaka kiraro - scuffed kiraro tany amin'ny oniversite. Nieritreritra indray eo an-tanako undergraduate traikefa, Tsy mino aho fa nanao azy mihitsy aza aho 10 fotoana, Handimby avo nitondra tena ny nandehanany ho sy ny fotoam-pianarana raha tsy iray mirefy ny ranomandry coated ny fonenan'ny mpianatra, amin'ny fotoana izay aho, niantehitra tamin'ny anja. ekena, I nitarina ny farany (somary.) A girly tovovavy amin'ny zavatra rehetra, Tsy mahalala hanao sweatpants aina tsara tarehy na mampiseho ny tavako tsy misy mitambatra ao saron-tava, ary tsy nahita mialoha izany miovaova. Fa izany no, ary manantena aho fa ny vehivavy no ho an'ny hafa, koa.
Tsy hoe misy zavatra tsy mety ao makiazy sy stilettos - tia azy ireo! Fotsiny aza miankina aminy. Rehefa mijery gazety sy ny haino aman-jery tsy tapaka Vary raraka ny manodidina antsika, Tsy mila manontany tena hoe nahoana no toy izany ny vehivavy maro dia amin'ny shaky tany ao amin'ny sampan-draharahan'ny matoky. Zaraiko aminareo ny lesona manaraka nianatra aho avy feline namana sy ny mahitsy-fitifirana olona teo amin'ny fiainako:
1. Handray ny marika manokana: Indray fahavaratra ny voalohany daty tamin'i Chris, Raiki-tahotra aho mikasika ny fomba hatsatra nijery aho ka nampiasa tena Tanner. Raha hoy Izaho aho hatsatra, Aho hoe vatosanga fasiana aho manamorona translucent, ka io vahaolana haingana-nitarika ny na inona na inona, fa vandana ny voasary sy ny nenina. Rehefa (hinia) nanontany raha nihazona izany andraikitra izany nitafy-tena mpandon-koditra, I tonga madio (na dia tsy amin'ny heviny ara-bakiteny, toy izay mandray anjara isan-kerinandro ny exfoliation.) Dia nanontany ahy ny antony aho hanao izany mihevitra aho tsara tarehy sy tsy fahita firy ny feo hoditra. Na oviana na oviana aho nandre olona manondro ny hoditro izany, ary nahatsapa tena adaladala ny miezaka ny hanova zavatra miavaka amin'ny vokatra izay Isaka nandre metaly, ary nandao ny hitafy ny akanjo mandry sy ny akanjo fotsy muddied.
Ny mpiara-miasa maniry antsika tahaka ny tenantsika, ary tokony haniry, koa. Toy izany koa ny manana mampiaraka profil sary izay mijery na inona na inona toy ny anao, photoshop lasa ny fotoana ny fankatoavana. Izahay rehetra, tsy manam-paharoa, ary ireo zavatra izay hahatonga antsika ho antsika koa ny hafa miavaka avy amin'ny vahoaka. Tadiavo ny fahatokiana mba hampisehoana ny tena marika fa tsy mitsiriritra ny hafa '.
Raha ny saka, Marina koa. A Calico tsy eto intsony marika tsara noho ny tabby - izany rehetra ao amin'ny mason'ny ny beholder.
2. Aza tena mahamenatra: Roa ny saka dia kely, roa dia ny salan'isa koa manaova, ary ny roa dia lehibe. Tsy mahalala izany. Ny lehibe indrindra jumps saka ny saka antsasaky ny habeny sy manontany tena hoe nahoana izy ireo no tsy faly amin'ny tolona kilalao daty. Raha ny vehivavy ihany no afaka hanakana ny tena-mpiseho isika na manamavo ny sy Hafahafa ihany hanamora. Isika avy amin'ny endriny isan-karazany sy ny habeny, nefa reko maro ny sakaizany tsy eo sy amin'ny tokony ho fantatr'i vatana kileman-toetra. Ireo fomba fijery ireo dia miaraka amin'ny tahotra ny fomba fiheveran'ny olona ny vatany raha oharina amin'ny Victoria ny Secret modely. Izany karazana lahateny tena-kapobeny dia mitarika ho ataontsika momba ny tsy ny tenany, fa ny vatantsika amin'ny ankapobeny. I Nandresy ny tahotra rehefa mandre teny nalaina tahaka aho, "Real vehivavy curvy." Mahafinaritra ny vehivavy avy amin'ny fihaingoana ny endriky, aoka ny handray na inona na inona mahita antsika olo-malaza amin'ny endrika salama. Ny olona tsy te hihaino antsika hamiravira masina ny vatantsika, ary isika rehetra-koa, matetika no nataony tao toe-javatra izay tsy afaka handresy, na inona na inona ny valin-. Kate Upton, Kate Winslet, ary Kate Moss dia samy hafa rehetra manorina, fa tsy izy rehetra hita fa tsara tarehy ny rehetra?
Fa ny fotoana lava indrindra, Tsy zakako fa ny tongotro tsy hanaraka-manify, izany sary an-tsaina ny fahatairako rehefa Chris nilaza tamiko fa tiany ny tongotro, ary soso-kevitra fa hanao bebe kokoa sy ny zipo fohy. Ny olona tsara no handeha tahaka ny tena fa tsy hanery anareo mba reshape izany. Tadidio foana fa.
3. Ankafizo sakafo: Ah, ny fientanam-po ny treats. Rehefa mihorohoro fa kitapo ny itiavan'ny olona, enina ny saka Mampianiana nandroso teo ny tongotro. Tia sakafo amin'izao teboka izany hetsika. Iza no afaka manome tsiny azy ireo? Toy izany ny vehivavy maro, I niady tamin'ny sakafo araka izay niaritra ny vatana voalaza etsy ambony henatra ny tsy mahatsiaro ho tanteraka svelte amin'ny Bikini. I milanja dimy kilao ankehitriny kokoa noho ny rehefa Chris ary aho tamin'ny voalohany, fa ho takalon'ny izany, Aho nizara betsaka ny pizza miaraka aminy mandritra ny zoma alina TV binges. Tsy hatakaloko na inona na inona ireo isa teo amin'ny ambaratonga. Lavitra kokoa aho aina miaraka amin'ny tena amin'ny 31 noho ny hatramin'izay teo amin 'ny tanora.
Mihinana salama dia zava-mahagaga, ary mafy aho mpino eo amin'ny fikarakarana ny tena (zahao etsy ambany.) Mankafy ny fiainana sy ny tsirony, aza, dia zavatra lehibe tsara tarehy, koa. Aza mifantoka loatra amin'ny fihinanana calorie izay tsy mahafehy ny mankafy ny sakafo - sy ny resaka miaraka amin'izany ny.
4. Karakarao tsara ny tenanao: Raha ny saka dia reraka, izy ireo matory. (Izy rehetra reraka tanteraka, fa momba izay ihany.) Rehefa saka iray hafa mahatezitra azy ireo na Manafika ny toerana voatondro, tsy misy fisalasalany izay maneho tsinontsinona. matetika, Antitranterinay ny miteny ny saintsika, na avelantsika olona hitondra antsika amin'ny fomba izay dia tsy hitsaboana olon-kafa. Saka, ary ny olona raha tsy izany, dia manana fironana ny Misitrisitra sy haka azy eo amin'ny, dia toy izany no mifindra eo amin'ny ny fiainany ka tsy mihazona ho amin'ny lolom-po, na mangidy. Matetika izy ireo no tsy zavatra toy izany manokana, ary fantany fa tsara kokoa ny hamela ny tena fihetseham-po mampiseho noho ny hanohy ny asa, ary nitsoka ny taty aoriana.
Ny fahamarinan-toetra-dehibe ao amin'ny fifandraisana, sy ny mpiara-miasa tsara ho tia anao na dia ianao kely noho loveable amin'ny tontolo ivelany. Raha toa ka tsy afaka haneho izay tena tianao, dia ahoana no namanao hanome izany anao?
Izany no sarotra toy izany ny iray, indrindra fa ho antsika izay miezaka amin'ny agreeableness. Raha ny fanampiana, Miezaka mieritreritra ny fehezanteny zavatra amin'ny fomba izay tsy ianao tezitra amin'ny raha toa izy ireo hoy ianareo. Izany fomba, ianao hoe izay hevitrao nefa tsy mba very tory ny olana. Arakaraka ny hanao izany, Mazava izany dia vao mainka ho avy aminareo. Ao an-tokantranoko, zavatra mampisitrisitra sy purring Samy feo iombonana, ary izy ireo dia samy manondro ny karazana fanajana: ny hafa sy ny tenantsika.
5. Misy eo amin'ny fotoana: Aho talanjona foana amin'ny fomba mijery ny saka ny vorona miaraka amin'ny fifantohana mitovy amin'ny fomba Chris milalao lalao video. Ny ela fomba fiteny ny nijanona ny manimbolo ny raozy dia malaza noho ny antony - izay mitondra mody indray aho mba kiraro avo.
Ny fanangonana kiraro taloha nanana loko tsara tarehy sy ny strappy izay fanaingoana, ary mbola manana maromaro niandry tsiroaroa ao amin'ny efi-tranonao ho an'ny akanjo tsara, na fara faharatsiny, ho an'ny mamanala izany vortex ho very ny grip. Rehefa Chris Dia nankany amin'ny diany voalohany ho any Las Vegas miaraka, Feno dimy aho tsiroaroa, sary an-tsaina tsy misy farany sy ny volony sequins (toa, teo amin'ny lohany, Vegas nidika toy ny showgirl akanjo.) Firy ireo tsiroaroa no farany aho manao? Aotra. Fa tsy, ny Target kapa nikapoka ny azo tsapain-tànana esory izay herinandro, ary tsaroako mahatsapa izany velom-pankasitrahana azy aho. Tsy tambo isaina Niady ankizivavy manodidina antsika amin'ny sehatra kiraro, malemy ny peep-rantsan-tongony fampijaliana. Amin-kitsimpo aho te mba hanolotra azy ireo ny dabilio sy sasany tarika-SIDA, satria fantany fa ny tany am-boalohany ho twenties tena sahirana miaraka aminy.
Ny saka dia tsy tara avy amin'ny squirrel-mijery fotsiny mba hahafahany mitovy tantana ny volony indray eo amin'ny toerana, ary tsy mbola afaka foana miaraka Chris nanana kapa tonta aho tamin'ny 4 santimetatra atraka. Matetika, fialan-tsasatra tsara indrindra miantehitra amin'ny hendry kiraro sy ny fandaniana ora maro manao saika na inona na inona.
Ny fiainana rehetra ny mitombo, ary ny fifandraisana dia afaka manampy antsika hahatakatra bebe kokoa ny tenantsika ho tafintohina sy hahomby. Toy izany koa, Afaka mandray soa avy amin'ny fifandraisana hatoky tena, tompon 'andraikitra ny marina, ary ny revo amin'ny treats sasany ankehitriny, ary avy eo. Enga anie, dia misy tsara sy mandanjalanja ny hisses (ny ankamaroany) purrs teny an-dalana.
Izany dia mampiaraka toerana, ary ny mampiaraka ho an'ny biby tia toerana, tsy misy latsaka. Noho izany no miresaka ny marina ...